Wararka - WIRELESS -KA WUXUU KU XUJAYSTAA BATERIGA FOONKAYGA?
Dhammaan baytariyada dib -u -soo -ceshada waxay bilaabaan inay hoos u dhacaan ka dib tiro cayiman oo wareegyo lacag ah. Wareegga lacag -qaadistu waa tirada jeer ee batteriga loo isticmaalo awoodda, haddii:
si buuxda loo soo oogay kadibna si buuxda loo miiray
qayb ahaan lagu soo oogay kadibna lagu qubay isla lacag (tusaale ahaan lagu soo oogay 50% kadibna la miiray 50%)
Ku -dallacaadda bilaa -waayirka ah ayaa lagu dhaleeceeyay inay kordhisay xaddiga ay wareegyada lacag -bixinta ahi dhacaan. Markaad taleefankaaga ku dallacdo fiilada, fiilku wuxuu awood siinayaa taleefanka halkii uu ka ahaan lahaa batteriga. Si bilaa wireless ah, si kastaba ha ahaatee, awoodda oo dhami waxay ka timaadaa batteriga oo xeedho -kiciyaha ayaa kor u qaadaya oo keliya - batterigu ma nasanayo.
Si kastaba ha noqotee, Isbahaysiga Awoodda Wireless - kooxda caalamiga ah ee soo saartay tikniyoolajiyadda Qi - waxay ku andacoodaan inaysan taasi ahayn kiiska, iyo ku -dallacidda taleefanka bilaa -waayirka ahi waxyeello ma leh marka loo eego ku -dallacaadda fiilada.
Tusaale ahaan wareegyada lacag -bixinta, baytariyada loo isticmaalo iPhones -ka Apple waxaa loogu talagalay in lagu hayo ilaa 80% awooddoodii asalka ahayd kadib 500 wareeg oo lacag -bixin ah.
Waqtiga dhejinta: May-13-2021